Haintrano goavana tetsy Ankorondrano : orinasa lehibe dimy kila hotohoton’ny afo | NewsMada
Haintrano goavana tetsy Ankorondrano : orinasa lehibe dimy kila hotohoton’ny afo
Adiny iray, adiny roa, adiny telo… taty aorian’ny niantombohan’ny afo, vokatry ny « court circuit », tao amin’ny toby fitobian’entan’ny orinasa Sicma, ao anatin’ny Village des jeux, Ankorondrano, sahirana tanteraka ireo pompiers noho ny haben’ny firehetana. Niitatra tsikelikely tamin’ireo orinasa lehibe dimy mifanila eo ny afo. « Alatsinainy mainty ! »
Nisahotaka tanteraka ny olona teny Village des jeux Ankorondrano sy ny manodidina, omaly hariva hatramin’ny alina nandritra ity haintrano goavana ity. Araka ny fitantaran’ny mpiasa nahita ny fitrangan’ny loza, fipoahana herinaratra niainga avy ao amin’ny fitobian’entana tao amin’ny orinasa Sicma no nitarika ny fahamaizana ka nampiitatra ny afo tamin’ireo orinasa manodidina. Isan’ny may tamin’izany ny toeram-pitsaboana iray sy ny haino aman-jery tsy miankina iray. Nalaky, araka izany, ny fiitaran’ny afo noho ny fitsokan’ny rivotra sy ny fisian’ireo akora mora mirehitra tao amin’ireo orinasa niharam-boina. Niezaka namoaka ny entana izay zaka ihany ireo niharam-boina, saingy noho ny fijoalajoalan’ny afo, lasa lavenona avokoa ny ankamaroan’ireo entana tsy voavonjy.
Tsy nifankahitana ny setroka mainty naterak’ilay haintrano vokatry ny firehetana.
Sahirana ny mpamonjy voina tamin’ny famonoana ny afo…
Tonga teny an-toerana fotoana fohy taorian’ny firehetana ny mpamonjy voina niaraka tamin’ireo kamiaobe mpamono afo. Sahirana ihany anefa ny mpamonjy teo am-pamonoana ny afo satria niainga avy any anatiny ny afo. Voatery tsy maintsy niroso tamin’ny famakiana ny vavahady iray lehibe miditra ao an-toerana izy ireo. Hatramin’ny omaly alina fotoana nialana teny an-toerana, mbola nirehitra ny afo ary nifarimbona samy nanao izay ho afany avokoa ny mpamony voina rehetra.
Misy hatrany ny mpanararaotra rehefa misy fahavoazana mahazo ireo niharam-boina toy izao. Efa nirangorango teny amin’ny manodidina ity tranobe toeram-piasana orinasa maromaro ity ny andian’olona marobe nikasa hangalatra ireo entana sisa tsy may tao amin’ny orinasa.
Tonga teny an-toerana kosa ny polisy taorian’izay nanao ny fiambenana.
Lehilahy iray no tratra nangalatra fitaovana informatika ka nifanenjehan’ny polisy. Mody niaraka tamin’ireo mpiasa ao amin’ny orinasa izy kanjo nitondra izany nivoaka ary nitsoaka avy hatrany. Tratra ihany anefa izy taorian’izay.
Araka araka ny fanadihadiana momba ity fahamaizana ity.